Duceysane, Author at Ceelhuur Online - Page 2 of 60
Home > Duceysane > Page 2
February 19, 2020 Duceysane662
Dowlada Maraykanka ayaa cambaareysay dilkii weriye Cabdiweli Cali Xasan oo lagu diley magaalada Afgooye ee gobolka Sh/hoose. Qoraal ka soo baxay safaarada Maraykanka ayaa ugu horeyn tacsi loogu direy xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay shaqo wadaaga ahaayeen weriye Cabdiweli Online oo wakiil wareed u ahaa taleefishinka Universal iyo idaacada Kulmiye. Safaaradu waxay sheegtey […]
February 18, 2020 Duceysane684
Madaxweynaha Somaliand Muuse Biixi Cabdi oo maanta khudbad u jeediyay golayaasha Maamulka Somaliland ayaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa safarka uu ku tagay Itoobiya ee uu kula kulmay Madaxweyne Farmaajo. Muuse Biixi Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in booqashadii uu ku tegey Addis Ababa ay ahayd casuumad uu u fidiyay ra’iisul wasaaraha Itoobiya […]
February 18, 2020 Duceysane535
Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Africa AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Maraykanka lagu diley mid ka mid ah dagaalamayaasha Alshabaab oo ku sugnaa degmada Jilib. Miguel Castellanos Ku xigeenka hawlgalada Africom ayaa sheegay in dagaalayaasha al-Shabaab ay qayb ka yihiin kooxaha argagaxisada ah […]
February 18, 2020 Duceysane934
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Janeraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa uu xilkii ka qaadey Taliyihii Saldhigga Ciidanka Booliska degmada Wadajir Cabdi-baasid Maxamuud Cagey. General Xijaar ayaa u magacaabay taliyaha cusub ee Saldhigga Booliska degmada Wadajir Saciid Cali Maxamuud oo kamid ah Saraakiisha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed. Illaa hadda la ma oga sababta keentay in xilka […]
February 18, 2020 Duceysane580
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe ay rag hubeysan soo weerareen bar koontarool oo ku taal gudaha magaalada Jowhar. iskahorimaad kooban oo ka dhacay halkaas ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidamada booliska magaalada Jowhar. Rasaas xoog leh ayaa la sheegay […]
February 15, 2020 February 15, 2020 Duceysane672
Dowlada Maraykanka ayaa dul dhigtey abaalmarin gaareysa 5 malyan oo dollar muwaadin ka soo jeeda dalka Maraykanka oo ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in lagu arkay wadooyinka magaalada Diinsoor qoraalo ay ku qornaayeen abaalmarinta iyo magaca iyo sawirka qofka la baadigoobayo. Sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab ee la dul […]
February 13, 2020 Duceysane764
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay Ciidamo Itoobiyaan ah iyo Maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaano Macawiisley ayaa ka dhacay Tuulada Af qurun oo qiyaastii 48KM u jirta deegaanka Far Libaax. Sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa ka dambeeyay kaddib markii Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo gudbay xadka u dhaxeeya Gobolada […]
February 13, 2020 Duceysane653
Dowlada Maraykanka ayaa ku dhowaaqday inay ka qaaday xayiraadii ay ku soo rogtay sanadkii 2001dii shirkada Barakat oo ganacsi xoog leh hore ugu lahayd dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay Waaxda Maaliyada ee dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in la joojiyay oo la xirey dhammaan eedeymihii loo haystay weerarkii bishii 11kii September 2001dii lagu qaaday […]
Wararkii ugu danbeeyay xaalada magaalada kismaayo iyo digniino loo diray mucaaradka
February 13, 2020 Duceysane749
Xaalada magaalada Kismaayo ayaa saaka ah mid degan, kaddib markii shalay iska hor imaad kooban uu dhex maray Ciidamada amniga Jubbaland iyo ciidan taabacsan C/naasir Seeraar oo ka mid ahaa Golaha Is bedel doonka Jubbaland, horayna taageerayaashiisa ay u doorteen Madaxweynaha Jubbaland. Ammaanka magaalada ayaa xalay si aad ah loo adkeeyay, waxaana ciidamada ay waddooyinka […]
February 12, 2020 Duceysane508
Shir sanadeedka Garsoorka dalka ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasoo ah sanadkii labaad oo la qabto shirkan, iyadoo ay ka qeyb geli doonaan Hey’addaha Garsoorka dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Arrimaha shirkan looga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha heysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeyn lahaa Garsoorka dalka, iyadoo la filayo […]